elu-elu ngwaahịa Factory - China elu ọgwụgwụ ngwaahịa Manufacturers, Suppliers
Spark ika Egwuregwu ọkụ eletrik
Ngwá ọrụ pụrụ iche pụrụ iche
Ngwongwo ala nke okpomoku na-ekpo oku
Nnukwu ike Invar alloy waya
Locomotive Braking Nguzogide ụdị
Special arụmọrụ igwe anaghị agba nchara waya
Mkpa Wide warara maka Gas Clean-elu
Mkpa Wide warara maka iko elu efere ọkụ
ngwaahịa dị elu
HRE High okpomọkụ electrothermal alloy
Ultra Free-Cut Stainless Steel Waya maka Ball-Point Pen ND TMỌD.
SGHYZ akwa okpomọkụ electrothermal alloy
Ultra elu okpomọkụ electrothermal alloy
HRE eguzogide kpo oku waya
A na-eji waya oku HRE eguzogide oku dị elu. Ihe e ji mara ya bụ: iguzogide okpomọkụ dị elu, ogologo ndụ ọrụ, ezigbo nguzogide ọxịdashọn, ihe nkedo magburu onwe ya na ime ụlọ, usoro ike dị mma, laghachi na mgbanwe nke obere, yana arụmọrụ ya dị mma karịa 0Cr27Al7Mo2 na arụmọrụ dị elu dị elu karịa 0Cr21Al6Nb, ojiji nke okpomọkụ nwere ike iweghachi 1400 ℃.
Ngwaahịa a bụ nke alloy master a nụchara anụcha site na teknụzụ metallurgy. Ọ na-arụpụtara site pụrụ iche oyi na-arụ ọrụ na okpomọkụ ọgwụgwọ usoro. Igwe ọkụ eletrik na-ekpo ọkụ nke elu-igwe nwere ezigbo nguzogide oxidation, nguzogide nrụrụ dị elu, obere creep, ndụ ogologo ndụ na obere mgbanwe iguzogide.
Ngwa SGHYZ bụ ngwaahịa ọhụrụ emepụtara mgbe HRE gachara nke e ji mee ihe na nnukwu okpomọkụ electrothermal alloy ihe na-adịbeghị anya. E jiri ya tụnyere HRE, ngwaahịa SGHYZ nwere ịdị ọcha dị elu karị na nkwụsi ike nke kachasị mma. Na pụrụ iche obere ụwa mmewere collocation na pụrụ iche Metallurgical n'ichepụta usoro, ihe a ghọtara site anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ndị ahịa na ubi nke elu-okpomọkụ okpomọkụ na-eguzogide eriri.
Na nzaghachi nke oku Premier Li Keqiang ka ọ kwatuo agha nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke China, SG-GITANE, guzobere ngwa ngwa otu ndị nyocha nke ndị ọkachamara isii nọ na Jenụwarị 2017 iji wepụta onwe ha ma mepụta akụrụngwa bọọlụ maka isi okwu bọọlụ.
Electric Heating Waya, Electric eguzogide Waya, Electric okpomọkụ Waya, N'ogbe High okpomọkụ Ọdụdọ Waya, Okpomọkụ eguzogide ọgwụ Ọdụdọ Waya, Electric Heating mmewere Waya Supplier,